Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguRupert
Isitalato sokuhlala esithe cwaka esinendawo yokupaka izithuthi ezitalatweni, igadi yepatio kunye nophahla lwamaplanga olujikelezileyo olufikelela ekhitshini nakwiindawo zokuhlala. Ehlotyeni sibonelela nge-BBQ kunye ne-cushions kwindawo yokuhlala ngaphandle. Indlu ikumgama omfutshane wokuhamba ukuya eMfuleni, iiklabhu zeyacht, iindawo zokutyela kunye neepubs ezininzi zasekhaya. Ibekwe kumbindi wedolophu. Umlambo kunye nokuhamba emaphandleni. Ikhosi yegalufa kunye neMyuziyam kaLoliwe yaseMangapps ikufutshane.
Indlu isembindini weDolophu. Ukuhamba umgama ukuya ezivenkileni, kwiindawo zentselo, kwiindawo zokutyela, kwiipaki ezinendawo yokudlala yabantwana, iiklabhu zequay kunye neeyacht. Igalufa iyafumaneka eCreeksea-imizuzu emi-5 yokuqhuba.
Iivenkile zeti kunye neecafe ziyafumaneka kwisidlo sakusasa, sasemini nasemva kwemini. Uninzi lwee-pubs kunye neendawo zokutyela ngaphakathi komgama wokuhamba. ITesco yendawo kunye ne-Co-0p kunye nezinye iivenkile ezincinci zasekhaya ezikufutshane nendlu.
Umsebenzi owonwabisayo wabantwana kukuhamba ngoononkala. Lahla umgca kunye ne-bait kuyo kwaye ubone ukuba bangaphi oononkala obabamba ngexesha elifutshane !! Uhlala uyintandokazi kunye neentsapho.
Umbuki zindwendwe ngu- Rupert
Le yindawo yokuzenzela ukutya. Uya kubuliswa ekufikeni kwakho kwaye unikwe iseti yezitshixo zokuhlala kwakho. Amaxesha okufika asusela ku-2pm ngomhla obekiweyo kwaye ukuphuma nge-11am ngosuku lwakho lokuhamba. Yixoxe ngoku xa ubhukisha. Ke sinako ukulungiselela ukufika kwakho ngokufanelekileyo.
Le yindawo yokuzenzela ukutya. Uya kubuliswa ekufikeni kwakho kwaye unikwe iseti yezitshixo zokuhlala kwakho. Amaxesha okufika asusela ku-2pm ngomhla obekiweyo kwaye ukuphuma nge-1…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Burnham-on-Crouch